बाजा बजाएर रोजगारी !
काठमाडौं । लोक सांस्कृतिक महिला नौमती बाजा समूहले कला देखाउँदै देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गरेको छ । उनीहरूले बाजा बजाएर स्वदेशमै युवालाई रोजगारी दिलाउन सकिने बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले नौमती बजाउँदै महिलाले पनि देशको हरेक क्षेत्रमा रोजगारीको
बागलुङ जीप दुर्घटनाः मृतक ११ जनाको पहिचान खुल्यो
काठमाडौं । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बाग्लुङको बडिगाढ गाउँपालिका वडा नम्वर ७ जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका १४ मध्ये ११ जनाको पहिचान खुलेको छ । गुल्मीबाट बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाको देविस्थान आउँदै गरेको ग १ ज ५२१९ नम्बरको जीप मध्यपहाडी लोकमार्गको कोप्चेको भीरमा खसेको थियो । जीप दुर्घटनामा १
बुढानीलकण्ठमा आठौं स्काउट एड्भेन्चर ट्रयाल क्याम्प
काठमाडौं । चारुमती मित्र ओपन स्काउट ट्रुप/क्रुयुद्वारा आठौं एड्भेन्चर ट्रायल क्याप आयोजना गरिएको छ । बुधबारदेखि आयोजना गरिएको उक्त क्याम्प स्काउटका विभिन्न शाहसिक कृयाकलाप गर्दै शनिबार सकिने छ । २ दिन १ रातको उक्त क्याम्पमा स्काउटहरूलाई विभिन्न स्काउटिङ क्रियाकलाप गराई आत्माविश्वास जगाउने
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । प्रत्येक वर्ष मार्ग शीर्षकृष्ण त्रयोदशीका दिन बेलुकी दिवङ्गत पितृका नाममा दीपदान र चतुर्दशीका दिन बिहान शतबीज छरी मनाइने बालाचतुर्दशी पर्व आज बेलुकीदेखि मनाइँदैछ । पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवमन्दिरमा बालाचतुर्दशीको अघिल्लो रात आज दिवङ्गत पितृका नाममा दीपदान गर्न
आठौं स्काउट एड्भेन्चर ट्रयाल क्याम्प हुने
काठमाडौं । चारुमती मित्र स्काउट ट्रुप/क्रुयुद्वारा एड्भेन्चर ट्राइल क्याप मंसिरमा आयोजना हुने भएको छ। विभिन्न स्काउट कृयाकलाप गर्दै आएको क्रुयुले ट्राइलको ८औं संस्करण गर्न लागेको हो । २ दिन १ रातको उक्त क्याम्पमा स्काउटहरूलाई विभिन्न स्काउटिङ क्रियाकलापहरु गराई आत्माविश्वास जगाउने सहयोग पुगोस भने
सोधपुछ गर्न प्रहरीले श्रीमती बोलाएपछि अघोर बाबा तनावमा !
काठमाडौं । केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ‘लाईफ ड्यामेज’ अघोर बाबा विजय केसीकी श्रीमती सारदा पाण्डे विरुद्ध ठगीको आरोप लागेपछि उनी तनावमा छन् । उनकी श्रीमतीलाई सोमबार बौद्ध प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार ठगीको उजुरीमा सोघपुछ
कपिलवस्तुमा हिन्दू र मुस्लिमबीच तनाव, कर्फ्यु आदेश जारी, एकको मृत्यु
काठमाडौं–लक्ष्मी पूजा गरेपछि मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप हुदा एकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिक सुरज पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहिले बताएको छ । लक्ष्मी पूजा गरेपछि मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच तनावको
रगतकाे नमुना दिन महरालाई आदेश
काठमाडौं – महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी ७ दिन अनुसन्धानको समय थप्दै परीक्षणका लागि रगत दिन आदेश दिएको हो। प्रहरी
कुखुरापालक किसानमाथि दाना उद्योगीको ज्यादती
काठमाडौं । राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिले दाना उद्योग संघ, ह्याचरी उद्योग संघ एवं राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले आफूहरुमाथि विगत तीन दशकदेखि निरन्तर उत्पीडन एवं ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आजसम्म पनि उपयुक्त किसानमैत्री
काठमाडौं। मौसम पूर्वानूमान महाशाखाले पूर्वी तथा मध्य हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ । मौसममा आएको बदलीसँगै देशभर केही चिसो बढेको छ । महाशाखाका अनुसार सोमबार देशको मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सामान्य बदली रहने तथा पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ । अरब सागरको पूर्वीमध्य भागमा
भाइटीकाको उत्तम साइत कात्तिक १२ गते बिहान ११ः५५ बजे
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । कात्तिक १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः५५ बजे भाइटीकाको साइत उत्तम रहेको उनले बताए । कात्तिक
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लडन भट्टराईको चुनौती
गोरखा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उपचुनाव लडेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । चुनावका लागि राजनीतिक दल खोल्न पनि उनले शाहलाई सुझाएका छन् । गोरखाको सदरमुकाममा बिहीवार पार्टीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा
काठमाडौं । हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई तीन दिन अझैं हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । महरालाई प्रहरीले २८ असोज बिहान नर्भिक अस्पतालबाट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपका उपस्थित गराएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा महराको डीएनए परिक्षण
काठमाडौँ । आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाअष्टमी पर्व आइतबार नेपालीहरुले बडादशैँका रुपमा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी भव्यरुपमा मनाउँदैछन् । बडादशैँको आठौँ दिन शनिबार महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाशनिबारा गरिन्छ । महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले
ललितपुर । आज शनिबार दसैंघर, कोत तथा घरघरमा फूलपाती भित्र्याएर फूलपाती पर्व मनाइँदै छ । नवरात्रको सातौं दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ । घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दसैंघर अथवा पूजाकोठामा शुभसाइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, मानक,
दार्चुला– अपी हिमाल गाउँपालिका ३ का कपुरसिंह धामीले दशैँमा आउने आफन्तलाई स्याउ कोसेली दिने तयारी गरेका छन् । बारीभरि लटरम्म फलेका स्याउ बिक्री गर्न बजार नपाएपछि घरमा आउने आफन्तलाई स्याउ कोसेली दिने तयारी उनले गरेका हुन् । धामीले यसअघि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा भएको एक कार्यक्रममा झण्डै दुई सय दाना
काठमाडौं, १५ असोज– नेपालीहरुको महान चाड दशैंको चौथो दिन आज दुर्गा भवानीका ९ रुपहरु मध्येको चौथो रुप कुष्माण्डा भगवतीको पूजा अर्चना गरि मनाइदैँछ । महाकाली महालक्ष्मी, महासरस्वतीलगायत नवदुर्गा र अन्य शक्तिपीठहरुमा आज पनि बिहानैदेखि भक्तजनहरुको घुइँचो लागेको छ । प्रतिपदादेखि पूणिर्मासम्म विभिन्न
काठमाडौँ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ५४ जना सडक बालिबालिकाको उद्धार गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त शहर बनाउने नेपाल सरकारको अभियानअनुरुप राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको संयुक्त टोलीले गए राति ठमेल, रत्नपार्क र नयाँ बसपार्कबाट २८ जना बालिकासहित
सभामुख महराको राजीनामा
काठमाडौं । यौन दूराचारको आरोप लागेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। महराले ‘सञ्चार माध्यममा आफ्नो चरित्रमा प्रश्न उठाइ लगाएका आरोपको सत्यतथ्य,निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन’मा सहजहोस भनी राजीनामा दिएका छन् । यौन दूराचारको आरोप लागेपछि महराले पार्टीका शीर्ष
अब नागढुंगामा जाम हुँदैन: ट्राफिक प्रहरी
काठमाडौं–केही दिनअघि काठमाडौँको नागढुंगादेखि धादिङको नौबिसेसम्म गाडीको ठूलो लाइन लाग्दा यात्रु नराम्ररी प्रभावित भए । यहाँको २०/२५ किलोमिटरको बाटो पार गर्न यात्रु घण्टौँसम्म कुर्न बाध्य भए । यात्रु शान्ति अधिकारीले गल्छीबाट नागढुंगा उत्रिन नौ घण्टा लागेको तीतो अनुभव सुनाए । सामाजिक सञ्जालमा
काठमाडौं ६, असोज । दशै, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत्लगायतका चाडपर्वमा सवारी व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नआउने सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुले स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले
२५ गतेको संसद बैठक चल्छ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन् देवेन्द्र पौडेल
काठमाडा । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद देवेन्द्र पौडेलले २५ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिने स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पौडेलले
काठमाडौँ, २७ भदौ - वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा–आरधना गरी आज परम्परागतरुपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखालगायत स्थानमा मनाइन्छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक
मुटुको परीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पताल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुटुको परीक्षण गर्न महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल जानु भएको छ । आज बिहान उनले मुटुको परीक्षण गराएका हुन् । फलोअपका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा पुग्नु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले